ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး အကြောင်း (Preview)
L.W.M.M - Introduction Part
L.W.M.M - Learning Part
L.W.M.M. - Social Part
L.W.M.M - Work Part
L.W.M.M - Money Part
L.W.M.M - Family Part
L.W.M.M - Healthy Part
L.W.M.M - Religion Part
L.W.M.M - Happy Part
L.W.M.M -7Life Management Part
L.W.M.M - Life Planner Part
Chapter (1) - မိမိဘဝပုံစံအား စတင်အမှတ်ပေးရန် (40 < 60 > 80) ? အကြောင်းကို အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (2) - မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ ဘဝပိုင်ရှင် ခေါင်းဆောင်၏ ကောင်းကွက်များအကြောင်း , 2E/ Role-Model နည်းလမ်း/ 3T 100% နည်း/ IQ-EQ/ Learn form Nature အမှန်တရားရှာနည်း စတဲ့ Key Topic များကို အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (3) - ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် မိမိနဲ့ဝါသနာတူ Partner မိတ်ဆွေများ၊ မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများအရေးကြီးပုံအကြောင်း အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (4) - နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု PDCA နည်းနှင့် အကြီးအကဲတို့၏ အလုပ်လုပ်နည်းအား မျှဝေထားပါတယ်။
Chapter (5) - စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် သင်ကြားခဲ့ရသော (Millionaire သန်းကြွယ်သူဌေးသင်တန်းမှ) အကြောင်းအရာများကို အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (6) - A-R-T Modelအကြောင်း ကမ္ဘာမှာဖော်ပြထားသော ကျား/မ မတူညီမှုသဘောတရားများ၊ မိသားစုကျင့်ဝတ်များ ကို အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (7) -Healthy Rule (Mind – Body – Energy) များ , စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် လေ့လာခဲ့သော ကျန်းမာစွာနေထိုင်နည်းများနှင့် Best Seller မိမိကိုယ်တိုင်ကုစားနည်းစာအုပ်) အကြောင်းများ အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (8) - ဘာသာတရား လေ့လာမှု၊ ရွက်ဖတ်မှု၊ ကျင့်ကြံမှုအကြောင်း , နိုင်ငံခြားမှာ ကျင့်သုံးလာတဲ့ MBSR သတိတရားကျင့်နည်း နှင့် စင်္ကာပူလေ့လာခဲ့ရသော (2 Kinds of Believe) နှင့် ဘယ်လိုကိုးကွယ်ယုံကြည် ကောင်းခြင်းပြုလုပ်မလဲဆိုတာ ဟောပြောထားပါသည်။
Chapter (9) - ကမ္ဘာမှာကျင့်သုံးသော EI အကြောင်း, သုသေသနပြုချက်အရ (အလုပ်ပြီးတိုင်း ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုရှိ၏) ကမ္ဘာမှာကျင့်သုံးလာသော EI နှင့် စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကို တိုင်းတာသော Mood Meter အကြောင်း အနှစ်ချုပ်ဟောပြောထားပါတယ်
Chapter (10) - မှတ်စုစာအုပ်တွင် ၇-ရက်၊ ၇-ချက် ပုံစံအား Exercise အိမ်စာရေးဆွဲပေးပါရန်။
နိုင်ငံခြားမှာသုံးသော 21 Days Challenge ၂၁ ရက်စာ ဘဝစိန်ခေါ်ပြောင်းလဲရေးနည်းများအတိုင်း၊ ၇-ရက် ၇-ချက်ပုံစံဖြင့် Life ဘဝရေးရာအဖြာဖြာ အနှစ်ချုပ်စီမံနည်း (၂၁-ချက်) အား ဟောပြောထားပါသည်။
Chapter (11) - မှတ်စုတွင် (မိမိရဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်း Age … to 75 အထိ ရေးဆွဲထားပါရန်)
ဒါသည်မိမိဘဝ၊ မိမိဘယ်သွားမှန်းမသိ ဘယ်ရောက်မလဲ၊ END 3-Life Styles Life Planner ရေးဆွဲရန်နှင့် ကမ္ဘာကျော် 80/ 20 Rule အရ ဘယ်အရာတွေကို ဦးစားပေးစီမံနေမလဲဆိုတာ နိဂုံးချုပ်အကြံပြုဟောပြောထားပါတယ်။